Sidee dib loogu cabiriyaa sawirro badan hal mar Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sida dib loogu qiyaaso sawirro badan hal mar Photoshop
Naqshadayaasha naqshadeynta waxay si joogto ah ula shaqeynayaan sawirrada ku dhowaad dhammaan mashaariicdooda, taas oo macnaheedu yahay inay si ammaan ah u isticmaalaan Photoshop oo ah mid ka mid ah qalabkaaga lama huraanka ah. Dareenkan, waxay noqon kartaa wax caadi ah in wakhti kasta oo loo baahan yahay in wax laga beddelo cabirka dhowr sawir, oo noqon kara hawl yar oo daal badan iyo waqti lumis weyn haddii gacanta lagu qabto.
Nasiib wanaagse Photoshop waxaa jira hab lagu qiyaaso sawirada badan isla waqtigaas iyada oo aan la helin dhibaatooyin waaweyn iyo talaabooyin aad u yar. Si tan loo sameeyo waxaan si fudud u samaynaynaa waxyaabaha soo socda:
Marka aan barnaamijka furno, markaa waa inaan tagnaa "Faylka" menu, ka dibna xulo "Script" ugu dambeynna guji "Image processor".
Marka xigta waxaa naloo soo bandhigi doonaa daaqada "Sawirqaade"Halka aan ku lahaan doonno fursado dhowr ah oo aan ku hagaajin karno.
Marka hore, waa lagama maarmaan in la doorto galka ay ku kaydsan yihiin dhammaan sawirada aan dooneyno in aan wax ka bedelno cabirka. Waa inaan sidoo kale sheegnaa galka ay ku badbaadi doonaan sawirrada wax laga beddelay.
Xulashada seddexaad waxay noo ogolaaneysaa inaan qeexno nooca feylka, taasi waa, haddii sawirada loo keydiyo sida JPEG qaab ama wixii kale ee la isticmaalayo.
Xuquuqda halkan waxaan ku qeexi karnaa tayada sawirka, sidoo kale waxaan ku qeexi karnaa cabirkiisa pixels waxaana xitaa nalasiiyaa xulashooyin aan ku keydin karno faylka PSD ama TIFF.
Markay wax waliba diyaar yihiin, kaliya waa inaad gujisaa socodka oo xoogaa sug inta hawshu dhamaanayso.
Ikhtiyaar dheeraad ah ahaan, xagga hoose ee daaqadda waxaa jira ikhtiyaar aad ku dalban karto ficil dhammaan sawirrada, aad ayey faa'iido u leedahay haddii aad rabto in sawirradu qaadaan astaan-biyood ama miiraha
Macluumaad dheeraad ah - 5 Casharro Photoshop ah si loo kordhiyo xirfadahaaga
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida dib loogu qiyaaso sawirro badan hal mar Photoshop
PHILIP MARROQUIN dijo
TALO SARE AH, AYAA SI DEG DEG AH U CAAWIYAY MAGAALO MUUQAALO BADAN SOO SAAR.
WAAD KU MAHADSAN TAHAY GARGAARKA.
Jawaab FELIPE MARROQUIN
5 cabsi ka dib Dhibaatooyinka ka dib Dhibaatooyinka loogu talagalay Halloween
5ta midab ee ugu badan ee loo isticmaalo xayeysiinta